महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्दा हुन्छ (डा. नारायण खड्काको अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले जनता समाजवादी पार्टीको भूमिकामाथि शंका गरेका छन् । जसपाको ‘दोहोरो भूमिका’कै कारण तीनदलीय गठबन्धन सुनिश्चित हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न किन नहुने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । शिलापत्रसँगको संवादमा पूर्वमन्त्री खड्काले नयाँ सत्ता समीकरण, कांग्रेसको आगामी भूमिका र निकासको बाटोबारे राखेका भनाइ सारमा ः
– अहिलेको राजनीतिक संकट दलका नेताहरूबीचको ‘इगो’का कारण सिर्जित हो ।
– जसपाको भूमिका शंकास्पद भएकैले हामीले तीन दलीय गठबन्धनका लागि परिस्थिति परिपक्व नभएको मानेका हौँ । जसपाभित्रको एक समूह केपी ओलीप्रति नरम देखिएको छ । ओलीले महन्थ ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाएको सुन्छु । जसपाका नेताहरूबीच नै केपी ओलीलाई हेर्ने नजर फरक–फरक पाएका छौँ ।
– महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओलीले आग्रह गरेका हुन् भने यो जायज कुरा हो । मधेसको एक इमानदार र पाको नेता हुनुहुन्छ ठाकुरजी । उहाँको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि चर्चामा आउँदा मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ ।
– सरकार जोसुकैको नेतृत्वमा बनोस् तर अब केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनु हुन्न । उहाँले यो पदमा बसिरहने नैतिक हैसियत गुमाइसक्नुभएको छ ।
– सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएको छैन । खासमा प्रधानमन्त्री ओली यही चाहनुहुन्छ । संसदप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा होस् । यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठोस् । यसरी नै अलमल्याउँदै लगेर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने चाहना पनि उहाँमा होला । ओलीजीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने परिस्थिति आयो भने कोही पनि जाँदैनन् त्यो चुनावमा । हामी त जाँदै जाँदैनौँ ।
– हामीले केपी ओलीलाई अब प्रधानमन्त्री मान्दैनौँ भनेका हौँ । एमालेलाई नै नमान्ने भनेका होइनौँ । एमालेले ओलीबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्छ भने हाम्रो समर्थन रहन सक्छ ।
– अहिले नै चुनावमा जाने परिस्थिति पैदा भए त्यो देशका लागि फाइदाजनक छैन । तीन वर्षमै चुनाव गर्ने हो भने संसदको आयु किन पाँच वर्षको बनाउनुपर्‍यो ? तीन वर्ष भनेर तोकिदिए भइहाल्यो नि !
–शुभेच्छुक र कतिपय साथीले कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा मलाई सभापतिमा उठ्न सुझाइरहेका छन् । तर, म विचार, सिद्धान्त र नीतिमा विश्वास गर्छु, बोराका बोरा पैसा बाँड्न सक्दिनँ । त्यसैले सभापतिमा उठ्ने/नउठ्ने अलमलमै छु । तैपनि आगामी माहौल कस्तो बन्छ, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर छ ।
पूरा भिडियो हेर्नुहोस् ः
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ४, २०७७, ०७:४०:००
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ?6min read